UkuCwangciswa kweziThili - ii-Geofumadas
Ulawulo loMhlaba. Isicwangciso soMrhumo seMhlaba
Ingakanani umhlaba onokubaluleka kwisixeko sakho?
Umbuzo obanzi kakhulu onokubangela iimpendulo ezininzi, ezininzi zazo zivakalelwa; ezininzi iimpawu ukuba ngumhlaba ongenanto okanye ongeyakhiwo, iinkonzo zikawonkewonke okanye iqela eliqhelekileyo lendawo. Ukuba kwakukho iphepha apho sasingazi khona inani lelizwe kwindawo ethile kwisixeko sethu, ngokuqinisekileyo kuya kuba ...
cadastre, Geospatial - GIS, UkuCwangciswa kweziThili
I-National System of Property Management SINAP
I-National System of Administration Property (SINAP) liqonga technology ukuba ihlanganise zonke iinkcukacha ezinxulumene nezibonelelo nezolawulo yesizwe, apho ezahlukeneyo zoluntu, abadlali abucala kunye nabantu ubhale zonke iintengiselwano ezinxulumene impahla ipropati, kuyimfuneko yomgaqo-siseko kunye nokuhlaziywa kwemarike ...
Okufumaneka, Geospatial - GIS, egeomates My, UkuCwangciswa kweziThili
Xa ukusebenzisa iziphakamiso LADM
Xa eziliqela lweeprojekthi mna inxaxheba, ndiye abakubonileyo nokudideka ebangela LADM akuthethi kuthi ezinxulumene ne bendiqonda ISO, kodwa ikheswa imihlaba yabo nesicelo sikwinqanaba ingqiqo koomatshini zobugcisa. Ngamanye amagama, ngendlela yokuyizalisekisa ngayo. Kumele kucace ukuba i-LADM ayifuni ...
cadastre, Okufumaneka, egeomates My, UkuCwangciswa kweziThili
Umzekelo Domain of Management Land - Case Colombia
Ukulawulwa kweMhlaba, ngoku, enye yeengxaki eziphambili zamazwe. Asinto i wolangazelelo entsha, ngokuba umsebenzi wayo ngokucacile kumanqaku eziphambili ze-siseko kunye nemithetho eyahlukeneyo elawula ubudlelwane abantu ngezibonelelo zikarhulumente nezabucala yesizwe. Ngaphandle ...
Mapping Project Land Securities in Latin America kunye Caribbean
I Lincoln Institute of Policy Land ikhwelo ntliziyo avela kuzo zonke izixeko Latin America kunye Caribbean inxaxheba ekwakheni imephu amaxabiso komhlaba kulo mmandla. Lo msebenzi uza kwenzeka kwi-8 kaFebruwari ukuya kwi-31 ka-Matshi ye-2016. Yazi indlela yokuziphatha ...
cadastre, Okufumaneka, UkuCwangciswa kweziThili
Master of Urban Design kunye noCwangciso [UJCV]
Le ngenye yezona zidibanisezi zamanqanaba ezithandekayo kuMmandla waseMntla eMerika, ngokuqwalasela ukubaluleka kunabo oorhulumente basekhaya kunye nokuphuthuma okungafunekiyo okulawulwa ziimpawu ezifanelekileyo ekulawulweni kwintsimi phantsi kwendlela yokuphuhlisa abantu. Iza kumzuzwana othakazelisayo, xa iYunivesithi yaseJosé Cecilio del Valle iphinda ivuselele kwakhona ...
Ukufundisa i-CAD / GIS, ezintsha, UkuCwangciswa kweziThili
Ukuhlanjululwa kwepropati yendawo yokuhlala kunye nokusebenzisana namaziko karhulumente
Lo ngumxholo oza kubhekiswa kwiNgqungquthela yesi-II yeGeometer yeNgcali, eya kubanjwa kwi-23 ka-Oktobha ye-2015 eMadrid. Kungekudala, imithetho emininzi yempembelelo enkulu iye yamkelwe kwipropati yesakhiwo. Le ngqungquthela iya kubonisa indlela ukuguqulwa koMthetho wokuThengiswa kweMali kunye neCadastre, kunye kunye ...
cadastre, UkuCwangciswa kweziThili
I-20 Isinyathelo sokwakha isixeko ukususela ekuqaleni
Le nto umqokeleli ukuze abalandeli Uphuhliso lwedolophu kunye noLawulo loMhlaba, ukuba ngaphaya ukutshaya kwizixeko smart ezikhangeleka ngathi ayiyontetho yemihla ngemihla esalatha ukuba singafaki nzima ephakanyiswe ngamanyathelo 20 lula, lo mngeni apho ukubheja amazwe afana eYiputa Equatorial Guinea kwi ...
UkuCwangciswa koMhlaba sisixhobo sokusetyenziswa okuzinzileyo kwemithombo yendalo. Iminyaka emininzi indawo Peruvian iye yabanjwa phantsi ingqiqo ukwenza kakhulu kwezibonelelo zendalo, kwezinye iimeko ezibangela iimpembelelo ezingalunganga kwi eziphila noseko imveliso yelizwe, naye ukwenza ...
Geospatial - GIS, UkuCwangciswa kweziThili
Yaziwa ngokuba yi-LADM kumgangatho wolawulo lomhlaba (uMmandla woLwazi loLawulo lweMhlaba), owakwazi ukuba yi-ISO 19152 kwi-2012. Ayisona isofthiwe, kodwa imodeli yombono ebonisa ubudlelwane phakathi kwabantu kunye nomhlaba; ukumisa oko kubonakala kwilizwe ngalinye kuhlukile kwaye ...
Kubizwa ngokuba yi-LGAF, indlela eyaziwa ngayo ngeSpanish njengesiKhokelo soVavanyo loLawulo loMhlaba. Esi sisisitye sokuxilongwa kwesimo selizwe somthetho senziwe, ngokwemithetho kunye nezenzo ezinxulumene nomgaqo-nkqubo wezemidlalo ngokukodwa ngokuhlala kunye ...
I-Global Mapper kunye ne-3 izifundo ezingaphezulu kwe-Civile
Civile yinkampani inika iinkonzo Consulting ezahlukeneyo noqeqesho ngentsebenziswano kunye neminye imibutho yoshishino kwimiba efana nophuhliso lwemisebenzi zobunjineli, ucwangciso lokusetyenziswa komhlaba kunye nokusingqongileyo. Apha simi kwiikhosi ubuncinane 4 zimalunga ukuqala, bonke kubanjelwa imodeli flow Seville, MODFLOW Le ...
Ukufundisa i-CAD / GIS, UkuCwangciswa kweziThili
I-Master of Management loMhlaba UNAH
Master of Management Planning and Land ezinikezelwa yi-National Ukuzilawula University of Honduras (UNAH), yinkqubo yezemfundo ukususela ekuqalweni kwayo e 2005, iye ukuphuhlisa ngokuhlangeneyo neSebe iJografi kwiYunivesithi yaseAlcalá (Spain) . Kuba umbuzo, kwanawezayo kuthi, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, sathatha ithuba ...
IQonga leMerika yaseMatriki ngeeMpawu eziphawulekayo zokungenelela kwimizi
Inkqubo yeLatin America kunye neCaribbean ye-Lincoln Institute for Land Land ivakalisa le forum ebalulekileyo, eya kubanjelwa eQuito, e-Ecuador esuka kwi-5 ukuya kwi-10 ngoMeyi we-2013. Ehlelwe ngokubambisana neBhanki yeSizwe yaseRiphabhuliki yase-Ecuador, injongo yayo kukusabalalisa, ukwabelana kunye nokuvavanya ...
I-International Virtual Cadastral Symposium
Ngenxa co-exhaswa Association of zokuma ePeru UNIGIS, Geowebss lizisa i nxaxamelo lowu nge "imo yangoku of cadastre kunye nezicwangciso yokwazisa kunye telematics yohlaziyo" nto leyo iya kubanjwa ngooLwezihlanu nangemiGqibelo 10 11 2012 Agasti. Lo mcimbi uza kuqhubeka Peru kodwa bonke abasebenzisi inxaxheba ...
cadastre, Ukufundisa i-CAD / GIS, UkuCwangciswa kweziThili
Ixabiso qhinga ulwazi indawo
Njengenxalenye yale ntetho kwiGeological Imaphu elikwiiCanary Islands, baya abaqhuba Technical Conference I-Strategic Ixabiso of Information Territorial. Lembombo ezi seshoni ziya kugxila yolwazi lwejiyografi, ukuba iindlela esinengqiqo gqolo kolwazi imekobume yomhlaba ngokwasemzimbeni kunye ngendaleko yayo ...
Iiphotography, UkuCwangciswa kweziThili
I-Trans 450, iBhasi yeThuthi yokuThuthuka yeTegucigalpa
Le projekthi ethandekayo eyenziwa ngoku e-Honduras, phantsi kolawulo lwe-Bus Rapid Transit (BTR). Nangona ngoku kulolu nqanaba lokuqonda phambi kokuba abathwali abangenalo ukucaca kwendlela imizi iguquke ngayo, kubonakala ngathi enye yezinto ezibalulekileyo ekuphuhliseni i-axis axis ...
ezintsha, UkuCwangciswa kweziThili
Ndayigqiba i-congress yoLawulo lweMhlaba kunye noPhando oluqhutyelwa eGuatemala, inyanga edlulileyo, sele iphoswe ukuboniswa kweziboniso. Zifumaneka kwiphepha elilodwa, nangona kunokwenzeka ukuzibona kwiSlideshare, ukusuka apho zingayilanda khona. Ndiyasikisela ukukhuphela kunye nokuyigcina kwifayile yakho, kucinga ukuba kule maxesha ...